စက်ရုံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနည်းလမ်းများ | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan ,OEM,ODM-cropprotectionmachinery.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan စက်ရုံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနည်းလမ်းများ ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအချက်များထိုကဲ့သို့သော၏အဆင့်ဆင့်မြားတှငျပွောငျးလဲအဖြစ် heathlands မျိုးစိတ်အားဖြင့်မီးကမကထပြုခဲ့ပင်ပေါက်ရန်အတွက်တုံ့ပြန်မှုရှင်းပြဖို့အကြံပြုခဲ့ကြ:allelopathic ဓာတုပစ္စည်း,ယှဉ်ပြိုင်မှု.ပိုးမွှားလူဦးရေ,scarification,မြေဆီလွှာတွင်အာဟာရ,နှင့်အပူချိန်အစိုးရများ၏(အယ်လ် er Rcnbuss.1973;Boucher I981;Warcup I981;Brit 1986;Cowling er အယ်လ်.i987;ဗန်က de Vcntcr&Esterhuizen 1988).char သစ်သားအားထိတွေ့ခြင်းအောက်ပါကာလီဖိုးနီးယား chaparral မျိုးစိတ်အတော်များများအတွက် Enhanced အပင်ပေါက်ရန်အတွက်(Kcclcy 1986)နှင့်များမှာမီးကျွမ်းနေပြီးသစ်သားကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ(Kocley&Pizzorno 1986)ယခင်ကအစီရင်ခံခဲ့ကြ.Fynbos မွို့တျောမျိုးစိတ်တစ်ခုကျယ်ပြန့်မျိုးစုံတို့အတွက်ပထမဦးဆုံးအမျိုးအနွယ်၏အပင်ပေါက်ရန်အတွက်နှိုးဆွအစီရင်ခံထားသည်(Lcvyns 1935;Martin1966;Boucher I98];Moll&Guhb 1981;ဘွန်း er အယ်လ်.1984:Brit 1986).
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cropprotectionmachinery.com/my/plant-protection-methods.html
စက်ရုံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနည်းလမ်းများ ထုတ်လုပ်သူနှင့် စက်ရုံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနည်းလမ်းများ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ ,OEM,ODM-ကျော် 72,384 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ cropprotectionmachinery.com